Tabaha si loo yareeyo ku tiirsanaanta taleefankaaga Android | Androidsis
Sida loo yareeyo ku tiirsanaanta taleefankaaga Android
Maanta dad badani waxay leeyihiin taleefan Android ah. In kasta oo taleefannada casriga ah aan had iyo jeer si wanaagsan loo adeegsan. Xaqiiqdii, dad badan ayaa ku dambeeya isticmaalka taleefanka xad-dhaafka ah, iyaga oo aan ogeyn goorta ay tahay in la joojiyo isticmaalka taleefankooda. Xaaladahaas, had iyo jeer waxaa jira qaar ka mid ah tabaha kuwaas oo isku day inaad yareyso ku tiirsanaantaan.
Marka waan ogahay samayn kartaa isticmaalka caafimaad ee telefoonka mar kale si fudud. Halkan waxaan idinkaga tagnay talooyin ama tabaha qaarkood oo wax ka tari kara xaaladahaas, si aad si caafimaad qab ah ugu isticmaashaan taleefankaaga Android markasta.
3 Kaliya barnaamijyada muhiimka ah
Hal sabab oo dad badani taleefanka ugu isticmaalaan si joogto ah, waa sababta oo ah waxay helayaan ogeysiis waqti walba. Wax aakhirka sababa iyaga oo isticmaalaya qalabka muddo ka dheer intii loo baahnaa. Nasiib wanaag, waan ku hagaajin karnaa ogeysiisyada ku saabsan Android mar walba dhib badan la'aan. Waxaan xitaa ka wada saari karnaa taleefanka dhammaantood.
Waxa ugu fiican kiisaskan ayaa ah yaree ama ka saar ogeysiisyada gebi ahaanba. Gaar ahaan kiisaska qaar ka mid ah codsiyada farriimaha sida WhatsApp waxay noqon kartaa muhiimad habaynta ogeysiisyada. Marka waxaa jira tijaabooyin ka yar ama u baahan in taleefanka la furo oo mar kale la isticmaalo.
Ikhtiyaar la xiriira tan ayaa ah in laga faa'iideysto Habka Rabshadaha Qalqal ee Android. Inta badan taleefannada leh nidaamka qalliinka maanta waxay leeyihiin qaabkan, oo laga heli karo goobaha. Tani waa qaab baabi'inaya ama yareynaya ogeysiinta wicitaanka iyo farriinta. Markaa haddii ay tahay inaan shaqeyno, wax baranno ama aan rabno inaan ka gooyno, isla sidaas ayaa loo isticmaali karaa. Haddii aad rabto, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto waxyaabo ka reeban, oo u oggolaanaya dad gaar ah inay kula soo xiriiraan. Waa hab aad u faa'iido badan oo ku saabsan Android, inaad si fiican u isticmaasho taleefanka.
Intaa waxaa dheer, dareenkan waxaa jira laba codsi oo kale oo la heli karo. Mid ka mid ah in waxaa macquul ah in qaar badan oo ka mid ah ay u dhawaqdo waa Nolol Dijital ah, waxaa heli kara isticmaaleyaal badan oo ku jira Android. Dhinaca kale, codsi kale oo ina siinaya taxane ah hawlo aad isugu dhow waa ActionDash, oo lagala soo bixi karo taleefanka iyo taas oo aan horay kaaga soo sheegnay.
Midabada lagu soo bandhigay shaashadda ayaa leh saameyn badan ku saabsan isticmaalaha sida ay u maleynayaan inbadan. Daraasado kala duwan ayaa muujinaya in dadku u muuqdaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan midabada diiran. Sababtaas awgeed, marar badan astaamaha ayaa lagu muujiyaa noocyada midabadan, sidoo kale ogeysiisyo. Sidoo kale, darbiyada ayaa yeelan kara midabadan xaalado badan.
Sidaa darteed, waxaa jira dhinacyo qaarkood oo ay tahay in lagu xisaabtamo arrintan, taas oo gacan ka geysan doonta sidii loo isticmaali lahaa taleefanka Android si ka yar sida caadiga ah. Waraaqda (wallpaper) waa shay muhiim ah, iskuna dayaya in uu isticmaalo midabyo dhalaalaya oo yar isla markaana sharad ku gala sooyaal yar oo madow ama codad qabow, oo bixiya dareen nasasho leh.
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha sharad shaashadda shaashadda iyo isticmaal shaandhada madow iyo tan cad, si shaashadu u noqoto mid aan midab lahayn. Waa ikhtiyaar kale, inkasta oo xoogaa ka sii xagjirsan dareenkan. Laakiin fikraddu way cadahay, yaree midabada shaashadda telefoonka, gaar ahaan codadka diiran. Waxyaabaha maskaxda lagu hayo marka aad raadineyso warqad darbi ah taleefankaaga Android.
Kaliya barnaamijyada muhiimka ah
Habka ugu fiican ee lagu yareyn karo jirrabaadda ama ku tiirsanaanta waa yaree tirada codsiyada on Android. Si aad u haysatid oo keliya waxyaabaha daruuriga ah, kuwaas oo kaa hor istaagaya inaad waqti badan ku lumiso isticmaalka taleefanka adiga oo aan ujeedo cad lahayn. Waxaa jira tiro barnaamijyo ah oo ku fiican in la haysto, kaas oo si caadi ah loogu isticmaalo taleefanka.
Dhinaca kale, waa laga yaabaa waxaa jira shaqooyin qaar aan adiga kuu anfacayn, laakiin inaad waqti badan ku qaadato isticmaalka. Waxaa laga yaabaa in gab qaar ka mid ah gab sidoo kale waxtar Sidaas waqtiga aad ku qaataan isticmaalaya telefoonka aad Android waa la dhimi lahaa. Ama waxaad sii wadi laheyd isticmaalka taleefanka waxtar badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo yareeyo ku tiirsanaanta taleefankaaga Android
App ka mid ah Hawada: Wax kasta oo aad ugu baahan tahay duulimaadyadaada hal barnaamij
Oppo R19 wuxuu noqon karaa taleefan shaashad daloolin ah, sida ku cad rukhsadda diiwaangashan